EPRP အဓိကဖော်ပြသောအရာများ Archives - Page2of3- EPRP ၀က်ဆိုဒ်တည်ဆောက် ပြုပြင်ဖန်တီးမ
အားလုံးပါဝင်မှ ငြိမ်းချမ်းရေးရမည်ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပြောကြား
၂၁ ရာစုပင်လုံညီလာခံဒုတိယအစည်းအဝေး မေလ ၁၉ ရက်ကစ၍ ငါးရက်ကြာ ကျင်းပမည်
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် သဘာပတိအဖြစ် ဆောင်ရွက်မည့် NCA အကောင်အထည်ဖော်မှုဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး (JICM) ယနေ့ ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပြီး ၂၁ ရာစုပင်လုံ ဒုတိယအစည်းအဝေး ကျင်းပမည့်ရက်ကို တရားဝင် ဆုံးဖြတ်မည်
You are at:Home»Category: "EPRP အဓိကဖော်ပြသောအရာများ" (Page 2)	Browsing: EPRP အဓိကဖော်ပြသောအရာများ
EPRP ၀က်ဘ်ဆိုဒ်တွင်ထုတ်ဝေခဲ့သော မကြာခင်ကရရှိသော အချက်အလက်များ၊ဆောင်းပါများကို အဓိက ဖော်ပြထားပါသည်။သာဓကအားဖြင့် ငြိမ်းချမ်းရေး အရင်းအမြစ်များ ကဏ္ဍတွင် မကြာမီက ထည့်သွင်းဖော်ပြခဲ့သော အကြောင်းအရာ၊စိတ်ဝင်စားဖါယ်ရာ အတွေးအမြင်ဆောင်းပါးတပုဒ်၊အသံ သို့မဟုတ် ဗီဒီယိုဖိုင် စသည်တို့ ထည့်သါင်းထားပါသည်။
Next	EPRP ထင်မြင်ယူဆချက်
စကျတငျဘာ 15, 2016EPRP	နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးတွင် ဒေသဆိုင်ရာစိုးရိမ်ပူပန်မှုများထည့်သွင်းနိူင်ရန်မည့် ပြည်နယ်အခြေပြုတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုများထူထောင်ရန် အလျင်အမြန်လိုအပ်လျှက်ရှိသည်။၂၁ ရာစု ပင်လုံညီလာခံနှင့်ပတ်သက်၍ EPRP အတွေးအမြင် အပိုင်း ၃ ကို ဤနေရာ တွင်ကြည့်ရှုနိူင် ပါသည်။
EPRP ကျားမဖြစ်တည်မှုသိရှိနားလည်ရေးပညာပေးလှုပ်ရှားမှု ။ ။ ဘ၀ဇာတ်ကြောင်းများ
စကျတငျဘာ 15, 2016EPRP	ယခုဗီဒီယိုအား EPRP ကျားမဖြစ်တည်မှုသိရှိနားလည်ရေးပညာပေးလှုပ်ရှားမှု တစိတ်တပိုင်းအဖြစ် EPRP ၏ရှမ်းပြည်နယ်ပူးပေါင်းညှိနှိုင်းရေးမှုး နန်းကေစီကထုတ်လုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ EPRP ကျားမဖြစ်တည်မှုသိရှိနားလည်ရေးပညာပေးလှုပ်ရှားမှုအား ဒေါက်တာခင်မာမာကြည်၏စိတ်ကူးနှင့် လမ်းညွှန်မှုဖြင့်အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံရှိ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုအသိုက်အမြုံ အသီးသီးမှအမျိုးသမီးများကို တွေ့ဆုံမေးမြန်းထားမှုများပါဝင်သည်။အဆိုပါတွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုများကို ဗီဒီယိုဖိုင် ၂ ခုဖြင့်ပုံဖော်ခဲ့ဖူးပြီး ယခုနောက်ဆုံးဗီဒီယိုသည် ဘ၀ဇာတ်ကြောင်းပေါင်းစုံကိုရွေးနှုတ်တင်ပြ ထားခြင်းဖြစ်သည်။ [22:54], စက်တင်ဘာတွင်လွှင့်တင်ပြီး မြန်မာတိုင်းရင်းသားဘာသာစကားပြောများကို အင်္ဂလိပ်စာတမ်းထိုးပါရှိသည်။
မိုဘိုင်းဖုန်းဖြင့် ဂျီမေးလ် အကောင့်ဖွင့်နည်း နှင့် အသုံးပြုပုံ
စကျတငျဘာ 14, 2016EPRP	ဂျီမေးလ် အခြေခံ အကြောင်းအရာများ ခြုံငုံသုံးသပ်ထားသော စာရိုက်ခြင်း၊ ပူးတွဲစာပိုခြင်း၊ အကြောင်းပြန်စာပို့ခြင်း စသည်တို့နှင့်အတူ ဂျီမေးလ် အကောင့်တခုဖွင့်နည်းတို့ကို ယခုဗီဒီယိုတွင် ရှင်းလင်းပြသထားပါသည်။ [3:33], နေ့စွဲ ။ ။ ၂၀၁၆ စက်တင်ဘာတွင် လွှင့်တင်သည်။
ကွန်ပျူတာဖြင့် ဂျီမေးလ် အကောင့်ဖွင့်နည်း နှင့် အသုံးပြုပုံ
စကျတငျဘာ 9, 2016EPRP	ဂျီမေးလ် အခြေခံ အကြောင်းအရာများ ခြုံငုံသုံးသပ်ထားသော စာရိုက်ခြင်း၊ ပူးတွဲစာပိုခြင်း၊ အကြောင်းပြန်စာပို့ခြင်း စသည်တို့နှင့်အတူ ဂျီမေးလ် အကောင့်တခုဖွင့်နည်းတို့ကို ယခုဗီဒီယိုတွင် ရှင်းလင်းပြသထားပါသည်။ [4:00], နေ့စွဲ ။ ။ ၂၀၁၆ စက်တင်ဘာတွင် လွှင့်တင်သည်။
နိုင်ငံရေး မိတ်ဆက်နိဒါန်း ၉။ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များ
စကျတငျဘာ 7, 2016EPRP	အုပ်ချုပ်ရေးဟူသည့်စကားရပ်မှာ ပါလီမန်စနစ်များရှိ ကက်ဘိနက်အဖွဲ့ သို့မဟုတ် သမ္မတစနစ်များရှိ အုပ်ချုပ်ရေး ဟုလူအများနားလည်ထားသော အစိုးရဦးဆောင်မှုခက်မကို လွှမ်းခြုံဖော်ပြသည့် အသုံး အနှုန်းဖြစ်သည်။အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့သည် ဥပဒေများကိုအတည်ပြုခြင်း၊ငြင်းခုန်ဆွေးနွေးခြင်းမရှိသော် လည်း ဥပဒေကြမ်းပြုစုရာတွင် ဦးဆောင်ရလေ့ရှိသည်။ Other chapters of “Introduction to Politics”.
နိုင်ငံရေး မိတ်ဆက်နိဒါန်း ၁၀။ တရားစီရင်ရေးမျ
စကျတငျဘာ 7, 2016EPRP	တရားစီရင်ရေးများသည် ဥပဒေများကိုကျင့်သုံးဖော်ဆောင်ရပြီး ၎င်းတို့ချမှတ်စီရင်မှုမှ ဥပဒေကို အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုပေးရသည်။တရားစီရင်ရေးသည် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့မှ လွတ်လပ်အမှီအခိုကင်းရမည်ဟု ယေဘူယျအားဖြင့်ယူဆထားကြသည်(ဆိုလိုသည်မှာ အစိးရခေါင်းဆောင်များ၏လွှမ်းမိုးမှုမှကင်းလွတ် ရမည်)။အမျိုးမျိုးသော ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာစနစ်များတွင် လွတ်လပ်ရေးရရှိရန် အမျိုးမျိုးသောနည်းလမ်းများ ပါဝင်သည်။ယခုအခန်းတွင် အင်္ဂလိပ်ရိုးရာဥပဒေစနစ်(Common Law)၊တရားမဥပဒေစနစ် (Civil Law) များနှင့် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးတို့အကြောင်း ဖော်ပြထားပါသည်။ Other chapters of “Introduction to Politics”.
စကျတငျဘာ 1, 2016EPRP	နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးတွင် ဒေသဆိုင်ရာစိုးရိမ်ပူပန်မှုများထည့်သွင်းနိူင်ရန်မည့် ပြည်နယ်အခြေပြုတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုများထူထောင်ရန် အလျင်အမြန်လိုအပ်လျှက်ရှိသည်။အပြည့်အစုံသို့
ဩဂုတျ 23, 2016EPRP	မြန်မာနိုင်ငံတော်၏အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ အစည်းများမှကိုယ်စားလှယ်များနှင့်ဇူလိုင်လအတွင်းကတွေ့ဆုံစဉ်က “ တောင်းဆိုချက်များအစား ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်မိမိတို့ဘာပေးဆပ်နိူင်မည်ကိုစဉ်းစားပါ “ ဟူ၍မှာကြားခဲ့ပါသည်။ ယခုစာတမ်းသည် ၂၀၀၈ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ တိုင်းရင်းသားပြည်နယ်များ၏ရှုမြင်မှုမှ နိုင်ငံရေးနှင့်လုံခြုံရေးကိစ္စပုံဖော်ဆောင်ရေးနှင့်ပါတ်သက်၍ အပြုသဘောဆောင်သောအကြံပြု ချက်များ ပေးခြင်းဖြင့် သေးငယ်သော်လည်းအရေးကြီးထင်ရှားသောတုန့်ပြန်မှုတရပ်ကို ဆွဲထုတ်ပြသရန်ရည်ရွယ်ပါသည်။
အကျဉ်းချုပ်အစီရင်ခံစာ ။ ။ ကချင်ပြည်နယ်ရှိ RANIR အဖွဲ့နှင့်နားထောင်ကြားနာရေးအလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲ
ဇူလိုငျ 15, 2016EPRP	၂၀၁၆ ဇူလိုင်လ ၁၂ မှ ၁၃ ထိ ကချင်ပြည်နယ်တွင် RANIR နှင့်အခြား CSO အဖွဲ့ဝင်များ(RANIR အောက်ရှိ)နှင့်အတူ EPRP နားထောင်ကြားနာရေးအဖွဲ့သည် ၂ ရက်ကြာအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်ခဲ့ ပါသည်။မိမိတို့အသီးသီး၏ နာထောင်ကြားနာရေးစီမံချက်များအကြောင်း ဗဟုသုတနှင့်အတွေ့အကြုံ များကို အချင်းချင်း မျှဝေခဲ့ကြသည်။ Other “Listening Project” summary reports here.
နိုင်ငံရေး မိတ်ဆက်နိဒါန်း ၈။ ဥပဒေပြုလွှတ်တော်များ
ဇူလိုငျ 10, 2016EPRP	ဥပဒေပြုရေးဆိုသည်မှာ ပါလီမာန်၊ကွန်ဂရက်၊chamber of deputies၊house of representatives၊ဆီးနိတ် စသည်ဖြင့် ပိုအသိများသော နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ ကိုယ်စားပြုမှုအဖွဲ့အစည်းကို ခေါ်ဝေါ်သည့် အသုံးအနှုန်းဖြစ်သည်။ဥပဒေပြုလွှတ်တော်သည် ဥပဒေပြဌာန်းအတည်ပြုသည့် မဏ္ဍိုင်ဖြစ်သ Other chapters of “ Introduction to Politics” .
Next About	In April 2013 The Ethnic Peace Resources Project (EPRP) emerged out of the work of the Myanmar Peace Support Initiative (MPSI),aNorwegian led international initiative to support the peace process in Myanmar. MPSI was established to work with the government, EAOs political groups, civil society actors, communities, and international partners to provide support to the ceasefire process.
စကျတငျဘာ 15, 2016EPRP	EPRP Highlights	NCA စာချုပ်ကို စကားလုံး ပြောင်းလဲပြင်ဆင်ရန်ပင် လက်ခံမည်မဟုတ်ဟု ဒု-တပ်ချုပ် ပြောကြား
ဧပွီ 25, 2017ွှ့The Voice အားလုံးပါဝင်မှ ငြိမ်းချမ်းရေးရမည်ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပြောကြား
ဧပွီ 24, 2017DVB	၂၁ ရာစုပင်လုံညီလာခံဒုတိယအစည်းအဝေး မေလ ၁၉ ရက်ကစ၍ ငါးရက်ကြာ ကျင်းပမည်
ဧပွီ 24, 20177 Day Daily	EPRP အဓိကဖော်ပြသောအရာများ	မြန်မာနိုင်ငံတိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုဒေသများရှိ မြေယာနှင့်မြေယာဥပဒေ